Chaza le bot ye-Twitter kwaye iya kufaka imibala kwiifoto zakho ngombala omnyama nomhlophe | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Le bot ye-Twitter iyakwazi ukufaka imibala kwiifoto zakho ngombala omnyama nomhlophe
Inyaniso leyo uthungelwano lweenethiwekhi luyakwazi ukusimangalisa kwaye isende indlela yokuhamba kwezi teknoloji zintsha. I-Twitter yenye yezo nethiwekhi zentlalo apho sinokufumana khona zonke iintlobo zeendaba kunye neenkonzo ezivela kwizigidi zeakhawunti esele ikho.
Ngoku kukho enye enakho ukuyenza imibala imibala iifoto zakho ezimnyama nezimhlophe ngendlela ezenzekelayo. Kwaye le ngxelo ivela kwingcinga yokuba umdali wayo wayenayo xa efumanisa ukuba ezo foto zeMfazwe yesibini (II) yeHlabathi xa zinemibala, zikwazile ukubonisa ngendlela engcono yonke into eyenzekayo kumnyhadala wemfazwe.
Le akhawunti yiColorize Bot kwaye iyakwazi ukufaka imibala kwiifoto zakho ngombala omnyama nomhlophe ngokubhala i-tweet kwaye ulinde imizuzwana embalwa. UGrace Rawson ugunyazisiwe ukuba enze esi sixhobo ekwaziyo ukufota imibala ngendlela ezenzekelayo.
Konke kubangelwe kukuFunda koMatshini kunye neArtificial Intelligence. Ngu-Oli Callaghan, umhlobo kaRawson, oqala Yenza uthungelwano lwe-neural ukusuka ekuqaleni kunye ne-C ++ kunye ne-OpenCL. I-Tensorflow sisakhelo esisetyenziselwa ukuFunda ngomatshini kwaye senziwe nguGoogle. Inika ujongano olucacileyo lokwenza iimodeli zokufunda ngomatshini.
Kule nto songeza imodeli eqeqeshwe ngababhali bophando kwiYunivesithi yaseBerkley. A uqeqesho olusekwe kwimifanekiso ezizigidi ezi-4,5, ke, njengoko unokutsho, babenedatha eyaneleyo ezandleni yokufunda ngomatshini, inomdla njengale nkqubo ye-adobeIya kusebenza kanye ngale akhawunti ye-Twitter.
Into ekufuneka yenziwe khankanya @colorisebot kwi-tweet, kwaye uya kuwubala umbala uncamathisele kwimizuzwana embalwa. Ukumangalisa nje into enokuyenza nge-Twitter bot.
I-bot enemibala: @kwenze
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Le bot ye-Twitter iyakwazi ukufaka imibala kwiifoto zakho ngombala omnyama nomhlophe
I-Storyboarder, isixhobo esitsha esikhululekileyo sokwenza iikhathuni kunye nee-animators